Mariana Trenchi: njirimara, ndụ na ihe nzuzo | Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu maka omimi ala mmụọ n’elu ụwa anyị, anyị na-ekwu maka isi dịkarịsịrị nso na etiti ụwa. N'okwu a, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kacha nso, ọ bụ ebe kachasị omimi edere na ihe dị ka mita 11.000 miri emi. Anyị na-ekwu maka Mariana trenchi. Mụ mmadụ enweela ike iru ngwụcha nke ili ndị a, mana ọnabatabeghị kpamkpam.
Ke ibuotikọ emi anyị na-aga-agwa gị ihe niile mkpa ka ị mara banyere Mariana trenchi na ya curiosities.
1 Otu ebe na hel
2 Ihe bi na Mariana Trenchi
3 Umu anumanu nke uzo Mariana
Otu ebe na hel
N’ime ụwa anyị a enwere ọtụtụ ihe gbasara n’ụwa niile. Agbanyeghị, ọdọ mmiri Mariana abụrụla ebe kacha mie emi na mbara ụwa. N'ebe a, anyị nwere nrụgide na ihe karịrị 1000 ikuku, naanị ogo 4 nke okpomọkụ na ọchịchịrị zuru oke. N'ịdị omimi miri emi, ìhè anyanwụ anaghị erute ebe a. O yiri ka hel kachasị egwu anyị nwere ike iche n'echiche, a na-akpọ ya etiti ụwa ma ọ bụ hel. N’agbanyeghi na o di n’ime omimi ala n’uwa, anyi nwere ike ichota ndu. Ọ nwere ọdịdị mịịlịk ma achọta ọwụwa anyanwụ nke Agwaetiti Mariana na Philippines.
Achọtara ebe kacha mie emi n’ụwa n’elu olulu a, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke dịkarịrị nso na etiti ya n’ihi ezughi oke nke geoid anyị. O nwere omimi nke ihe kariri mita 11.000 n'okpuru ala. Ọ bụrụ na anyị tinye Ugwu Everest n'ime ya, ọ ga-ewe mita ole na ole iji bịaruo elu ahụ. N’ebe akwa a ka mmadụ mere ọtụtụ nyocha. Nke mbụ n’ime ha bụ n’afọ 1960. N’ebe a ka Aguste Piccard a ma ama, ya na Don Walsh ruru omimi nke 10.911 mita. Mgbe e mesịrị, na 2012, onye na-ese ihe nkiri bụ James Cameron jisiri ike gbadata mita 10.908. Ihe ndekọ ahụ bụ Victor Vescovo, ruru omimi nke 10.928 mita. Echiche nke nwoke a bụ nnọọ ndakpọ olileanya. Ọ hụkwara ihe ndị fọdụrụ n'ime nje ndị mmadụ na-asọpụrụ ọbụna n'akụkụ kasị mie emi nke oké osimiri.
N'ime olulu a, e nwere nnukwu mmetọ plastik, ọ bụ ezie na ọ bụ ebe kacha mie emi n'ụwa, ebe ọ bụ nwanyị aga na ebe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ, mmetọ dị ebe a.
Ihe bi na Mariana Trenchi
Njem gaa na ala nke Mariana Trenchi dị ka njem gaa na nnukwu ịnọ naanị. Ọ bụ ezie na anyị enwereghị onwe anyị na ọnụnọ mmadụ na omimi ndị a, ọ bụghị naanị anyị ka anyị nọ. Ọ bụ ezie na mmadụ ole na ole nwere ike ịlanarị ọnọdụ ndị a dị oke egwu, enwere ụfọdụ na-eme ya. Na 2011 a chọpụtara na na ala nke abis ahụ ụfọdụ ndị xenophilous. Nke a pụtara na ha bụ ihe ndị dị ndụ yiri anwansị nke mmiri na anụmanụ ndị ọzọ na ile ya anya mbụ.
Iji dịrị ndụ na gburugburu ebe a, a chọrọ ụfọdụ ọkaibe mgbanwe mgbanwe evolushọn. Ha bu microorganism haziri na akuko. Nke a pụtara na ha nwere nnọkọ oriri na ọ someụ someụ ụfọdụ nke na-egosi na ha nwere mgbagwoju anya karịa ka ha dị. Ha bụ ọkachamara nke ọma ka ha nwee ike ibi ndụ n'ọnọdụ ndị a agaghị ekwe omume maka ndụ. Site n'inwe ụdị mmegharị a, ha dị oke njọ, ọ bụrụla ndị dị nro na enwebeghị otu nchịkọta iji mụọ ya na ndụ. N'oge ahụ, ọ dịka ọrụ agaghị ekwe omume ịmụ banyere anụmanụ ndị a dị ndụ n'ụzọ dị mma.
Ọtụtụ n'ime ihe anyị maara banyere usoro ihe ndị a bụ ndị ikwu anyị akpọrọ Xenophyophorea. Ọ bụ klas nke ndị na-agba ume, bụ ihe ndị dị ndụ na ụmụ anụmanụ bụ amoebae. Xenophiophores ndị a bụ anụmanụ ndị agbatịkwuru oke osimiri ahụ dị omimi karịa mita 6.000. N'ime klaasị ndị a, anyị hụrụ anụmanụ ndị siri ezigbo ike ijikwa nke ka bụ ihe omimi n'ọtụtụ ụzọ.
N'ihi ọtụtụ anụmanụ ndị a, ndị na-amụ banyere mmiri na-anwa ịkọwa ọrụ nke usoro okike ndị a. Echere na ha nwere ike a isi ọrụ ke okirikiri nke sedimenti na dozie na ala. Na mgbakwunye na xenophiophores, anyị na-ahụ ụfọdụ microorganisms nke bi n'oké osimiri. O siri ike inweta ihe omimi nke ihe ndị a ebe ọ bụ na ha anaghị egbochi mgbanwe n'ọnọdụ oke gburugburu ebe obibi. Inwe mgbanwe nke mmiri nke usoro ihe omimi ndị a dị mgbagwoju anya na-esiri ha ike ime ka ndị ọzọ gbanwee.
Umu anumanu nke uzo Mariana
Ọ bụrụ na anyị gafere ntakịrị, anyị hụrụ azụ miri emi karịa nke anyị hụrụ ụfọdụ na anụ ahụ gelatinous. Akpụkpọ ahụ anaghị ekwekọ ma daa mgbe nrụgide na ọnọdụ okpomọkụ abụghị nke Mariana Trench ebe ha bi. Fọdụ ụdị ndị bi n’ebe ndị a miri emi na-eme ka ebe a yie ọpụrụiche n’agbanweghị ya.
N'adịghị ka ihe na-eme na ntinye akụ miri emi ndị ọzọ na olulu ụtụtụ, enweghị bioturbations a hụrụ. Bioturbations abụghị ihe ọzọ karịa mgbanwe ụfọdụ na mbara ala nke ụmụ anụmanụ mere. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-ahụ bioturbations nke ikpuru ma ọ bụ holothurians kpatara nke nwere ike ime ka ala ahụ rụọ ọrụ ha. Anụmanụ kacha ibu bi na omimi banyere ihe dịka mita 8.000 bụ amphipods. Ha bụ anụmanụ nwere ọdịdị yiri llamas ma bụrụ ndị otu crustaceans.
Fọdụ ụdị cephalopods dị ka squids a na-akpọ ibu squids nwere ike iru omimi ndị a. Amabeghị ya nke ọma, mana ha bụ anụmanụ ndị a na-emegharị n'ọnọdụ oke. Ozugbo anyị banyere n'ime miri emi karị, anyị hụrụ ndị na-eri nri, gụnyere jelii na hydras. Anyị chọpụtakwara ụfọdụ toot, azụ̀ kpuru ìsì, ụfọdụ nwere okwute n'ụkwụ, na kukumba na-adịchaghị mma.
N'etiti okwu na ịdọ aka na ntị nke dị na omimi site na 4.000 na 6.000 mita, anyị nwere ụfọdụ anụmanụ nwere ọdịdị nke ndị ọbịa. Ndị a bụ ihe ịrịba ama kachasị atụ nke ọdịdị anyị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Mariana Trench na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Mariana trenchi
Oké Osimiri Caribbean